Ikhefu lokuzithandela: yintoni, ngubani onokuyicela kwaye kanjani | Ezezimali
Xa ubusebenza kwakuloo msebenzi ixesha elide, ngamanye amaxesha ukunxiba kukwenza ungasebenzi ngokusemandleni akho. Nangona kukho iiholide zokuphinda uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde nazo zibuye kwakhona, kukho enye into engaziwayo ngabantu abaninzi, kodwa loo nto inomdla ukuyithatha. Sithetha ngekhefu lokuzithandela.
Kodwa, Yintoni ikhefu lokuzithandela lokungabikho? Ngawaphi amalungelo onawo? Ngubani onokuyisebenzisa? U-oda njani? Ukuba ufuna ukwazi okungaphezulu malunga neli nani elichazwe kwiNgxelo yoMsebenzi, nakweminye imithetho, apha sikuxelela ngakumbi ngalo.
1 Yintoni ikhefu lokuzithandela
2 Ngubani onokucela ikhefu lokuzithandela
3 Ungayicela njani ikhefu lokungabikho ngokuzithandela
4 Buyela emsebenzini
5 Indlela yokucela ukungena kwakhona kwinkampani
Yintoni ikhefu lokuzithandela
Ukuchaza ikhefu lokuzithandela, kufuneka siqale siye kwinqaku lama-46 loMthetho wabasebenzi, okanye u-ET, apho kuchazwe oku kulandelayo:
"1. Ikhefu lokungabikho linokuzithandela okanye linyanzelwe. Ukunyanzelwa, okuya kuthi kunike ilungelo lokugcinwa kwesithuba kunye nobalo lobude bobunyani baso, kuya kunikwa ngokuqeshwa okanye ngonyulo kwindawo kawonke-wonke eyenza ukuba kube nzima ukuya emsebenzini. Ukungena kwakhona kufuneka kucelwe kwinyanga elandelayo yokumiswa kweofisi yoluntu.
2. Umqeshwa ononyaka omnye ubuncinane kwinkampani unelungelo lokwamkelwa ukuba angathatha ikhefu lokuzithandela lokungabikho ixesha elingekho ngaphantsi kweenyanga ezine kwaye lingagqithi kwiminyaka emihlanu. Eli lungelo lisenokuphinda lisetyenziswe ngumqeshwa omnye ukuba kuphele iminyaka emine oko kuphela ikhefu lokuzithandela elidlulileyo.
3. Abasebenzi baya kuba nelungelo lekhefu lokungabikho ixesha elingagqithiyo kwiminyaka emithathu lokukhathalela umntwana ngamnye, kokubini oko kungokwemvelo, njengokwamkelwa komntwana abengowomnye umntu okanye abantu abaphantsi kwakhe unonophelo olusisigxina., ukubala ukusukela kumhla wokuzalwa okanye, apho kufanelekileyo, kwisigqibo sezomthetho okanye sezolawulo.
Abasebenzi bakhathalele isalamane ukuya kuthi ga kwinqanaba lesibini lokutya kunye okanye lokudibana kuya kuba nelungelo lekhefu, elingenakudlula iminyaka emibini, ngaphandle kokuba ixesha elide lisekwe ngothethathethwano oluhlanganyelweyo, ngaphandle kwezizathu zobudala, ingozi , ukugula okanye ukukhubazeka akunako ukuzimela, kwaye akwenzi msebenzi ohlawulelweyo.
Ikhefu lokungabikho elixelwe kweli candelo, ithuba lalo elinokonwatyiswa ngendlela eqingqiweyo, lilungelo lomntu ngamnye labasebenzi, abesilisa nabasetyhini. Nangona kunjalo, ukuba abasebenzi ababini okanye nangaphezulu benkampani enye bavelisa eli lungelo liqela elifanayo lezizathu, umqeshi unokunciphisa umda wokusebenza ngaxeshanye ngezizathu ezifanelekileyo zokusebenza kwenkampani.
Xa isifundo esitsha sinika ilungelo lekhefu elitsha, ukuqala kwaso kuya kuphelisa eso, ukuba kufanelekile, besonwabile.
Ithuba apho umsebenzi ahlala khona esekhefini ngokungqinelana nemimiselo yeli nqaku liyakubalwa ngenxa yokuba sezikhundleni eziphezulu kwaye umsebenzi uya kuba nelungelo lokuya kwizifundo zoqeqesho lobungcali, ukuthatha inxaxheba ekufuneka kubizwe ngumqeshi, ngakumbi ngethuba lokubuyiselwa kwakhe. Ngexesha lonyaka wokuqala uya kuba nelungelo lokugcina umsebenzi wakho. Emva kweli xesha, ukubhukisha kuya kuthunyelwa emsebenzini kwiqela elinye lobuchwephesha okanye kudidi olulinganayo.
Nangona kunjalo, xa umntu osebenzayo eyinxalenye yosapho eyamkelwa njengentsapho enkulu, ukubekelwa umsebenzi kuya kwandiswa ukuya kuthi ga kwiinyanga ezilishumi elinesihlanu kwimeko yosapho olukhulu lodidi ngokubanzi, kwaye ukuya kuthi ga kwi iinyanga ezilishumi elinesibhozo ukuba luludidi olukhethekileyo. Xa umntu elisebenzisa eli lungelo ngexesha elifanayo nolawulo njengomnye umzali, ukubekelwa umsebenzi kuya kwandiswa ukuya kuthi ga kwiinyanga ezilishumi elinesibhozo.
4. Ngokukwanjalo, abasebenzi abasebenzisa imisebenzi yemanyano yephondo okanye ephezulu ngalo lonke ixesha besebenzisa isikhundla sabo njengabameli banokucela ukudlula kwabo kwimeko yekhefu lokungabikho kwinkampani.
5. Umsebenzi okwikhefu lokuzithandela ugcina ilungelo elinye lokukhetha ukungena kwakhona kwizithuba ezikoluhlobo lunye okanye olufanayo nezakhe ezikhoyo okanye ezikhoyo kwinkampani.
6. Imeko yekhefu ingandiswa nakwamanye amatyala ekuvunyelwene ngawo, ngolawulo kunye nemiphumela ebonelelweyo apho. "
Ngokusekwe koku ngasentla, sinako Ukuchaza ikhefu lokuzithandela njengemeko apho umsebenzi acela ukunqunyanyiswa kwesivumelwano sengqesho kwinkampani yakhe Ngale ndlela, nkqu nomsebenzi akanakuya emsebenzini. Kwaye inkampani akufuneki imhlawule umvuzo wakhe, okanye afake isandla kuye.
Njengokuzithandela, oko kuthetha ukuba ngumsebenzi ocelayo, nangasiphi na isizathu, ngaphandle kokunika ingcaciso kwinkampani. Ngaphandle kokuba kufikeleleke kulwalamano oluhle.
Ewe kunjalo, le ineziphumo ezininzi ekufuneka zithathelwe ingqalelo.
Ngubani onokucela ikhefu lokuzithandela
Ukuze ube nokucela ikhefu lokuzithandela kufuneka ukuba uthotho lwee iimfuno zezi:
Ukuba unesivumelwano sengqesho kunye nenkampani.
Lowo uneminyaka yobudala obuncinci kunyaka omnye.
Khange wenze sicelo sekhefu lokuzithandela lokungabikho kule minyaka mine idlulileyo.
Ukuba konke oku kwenziwe, ungaqala ukubhala uxwebhu. Kufuneka ithathelwe ingqalelo, njengoko kusitshiwo kwi-ET, ukuba oku kuya kuba ubuncinci iinyanga ezine kunye neminyaka emihlanu ubuninzi.
Ngokwenyani, i-ET imisela iindlela ezahlukeneyo zolu hlobo lwekhefu lokungabikho. Kodwa oko akuthethi ukuba kuphela kwezi meko apho kunokucelwa. Ngapha koko, inoku-odolwa nangasiphi na isizathu ngaphandle kwesidingo sokunika iinkampani uqobo.
Ungayicela njani ikhefu lokungabikho ngokuzithandela
Ukuba emva kwento oyifundileyo ucinga ukuba yile nto kufuneka uyenzile, kunyanzelekile ukuba wazi ukuba ngawaphi amanyathelo ekufuneka uwathabathile xa usenza isicelo sekhefu lokuzithandela lokungabikho.
Kule meko, Into yokuqala ekufuneka eyenzile iya kuba kukubhala ileta evela emsebenzini apho anxibelelana nenkampani ngokusetyenziswa kwelungelo lekhefu lokuzithandela. Kolu xwebhu akukho mfuneko yokuchaza izizathu ezikhokelela koku. Kodwa kukho ixesha, kokubini ukuqala nokuphela. Ukongeza, kuya kufuneka wazi ukuba kukho ubuncinci bexesha lesaziso phantsi kwesiVumelwano esiDibeneyo. Kwaye ukuba akukho, kuya kufuneka kubhengezwe kwinkampani ngokukhawuleza ukuze iphendule (ngokuqinisekileyo okanye kakubi) kweso sicelo.
Kule meko, unokufumana iingcinga ezimbini:
Inkampani iyalamkela ilungelo lakho. Kule meko, xa umhla omisele njengesiqalo ufika, ubudlelwane bezengqesho buya kumiswa, obungaphulwanga. Emva kwexesha, ukuba ayigqithi kwiminyaka emihlanu, uya kuba nakho ukuphinda umanyane kwakhona nanini na kukho izithuba.
Inkampani ayilamkeli ilungelo lakho. Kuya kufuneka wenze isimangalo ngokwaphula ilungelo kwaye, kude kufike isigqibo esisemthethweni, kuya kufuneka uqhubeke nokusebenza. Kwezi meko, uninzi lwabasebenzi luphela lucela ukugxothwa ngokuzithandela xa kungenakwenzeka ukulungisa ingxaki eyakhokelela kwikhefu lokungabikho ngokuzithandela kunye nosuku lokusebenza.
Akukho meko kufuneka umsebenzi ayeke ukuya emsebenzini wakhe, kuba ukuba uyayenza, inkampani inokumgxotha ngenxa yokuyeka umsebenzi. Ukuba inkampani ayiphenduli kwisicelo, kwimeko yokungamkelwa, kuyakufuneka ukumangalela kwaye ulinde iziphumo zoku.
Into yokuqala ekufuneka uyazi ngekhefu lokuzithandela kukuba, ukuba uyayicela, inkampani ayinyanzelekanga ukuba ikugcinele umsebenzi. Ngamanye amagama, xa ufuna ukubuyela kwinkampani, akunyanzelekanga ukuba ikunike umsebenzi obukade unawo ngaphambili. Kwinyani, into oza kuba nayo lilungelo lokungena kwakhona okukhethiweyo. Ithetha ntoni le nto? Ewe, ukuba kukho nasiphi na isithuba esikwinqanaba elifanayo okanye elifanayo, baya kukunika.
Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba, ngesiVumelwano esiHlangeneyo, okanye ngeminye imigaqo elawula ulawulo lwenkampani, ezinye iimpawu azinakuqinisekiswa. Umzekelo, ukuba kukho ukubekelwa indawo kwindawo encinci, kwaye emva koku kukungena kwakhona okukhethiweyo.
Indlela yokucela ukungena kwakhona kwinkampani
Ngokuxhomekeke ekubeni iminyaka emihlanu ayikapheli ukususela kwikhefu lokuzithandela, umsebenzi unokucela inkampani, ngencwadi ebhaliweyo, ukuba icele ukuphinda ungene emsebenzini.
La Inkampani kufuneka isifunde esi sicelo, ifunda ngezithuba ezikhoyo kwaye ziphendule kweso sicelo. Oku kuyacetyiswa ukuba kwenziwe ngokukhawuleza, ngakumbi kuba ukusondela esiphelweni sekhefu lokuzithandela kuya kuba kubi ngakumbi.
Ngokuphendula kwenkampani, unokufumana ngeendlela ezininzi:
Oko akuphenduli: Kuya kufuneka ulimangalele ilungelo lakho lokungena kwakhona (elingakhathalelwanga), ukongeza ekugxothweni. Ngeenjongo zomthetho, inyani yokuba inkampani ayiphenduli ngaphakathi kwexesha elithile ilingana nokugxothwa, kwaye kuya kufuneka ukunika ingxelo.
Yamkela isicelo: Inkampani iya kunika umsebenzi umsebenzi wodidi olufanayo okanye olufanayo kwaye umsebenzi angamkela okanye angawamkeli. Ukuba uyamkela, ungabuyela emsebenzini; ukuba akunjalo, kuyafana nokuba uthe ndlelantle (ngaphandle kokuba into ebeyinikwa ibingeyondidi enye okanye efanayo).
Ayisamkeli isicelo kodwa ayikuphiki ukungena kwakhona: Oku kuhlala kusenzeka xa iinkampani zingenazithuba ngaloo maxesha. Kwaye, ke ngoko, umsebenzi akanakho ukuphinda azimanye. Kuya kufuneka ulinde okwethutyana ukuze uphinde ufake isicelo.
Ungasamkeli isicelo kwaye awufuni kungena kwakhona: Ukulungele ukugxothwa, yiyo loo nto inkampani inokumangalelwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Ikhefu lokuzithandela
Isicwangciso sepenshini: isebenza njani